Ungawaveza kanjani amafayela wakho we-PowerPoint? - Easy Multi Khombisa
Idalwe Qalile 11 / 04 / 2021
I-15. Ihhovisi leMicrosoft
← Zonke Izihloko
Ungawaveza kanjani amafayela wakho we-PowerPoint ku-Easy Multi Display?
Ufuna ukwazi ukuthi ungawabonisa kanjani amafayela wakho we-PowerPoint ku-Easy Multi Display? Ngakho-ke usendaweni efanele!
Ungasebenzisa imodi yeSoftware ye-PowerPoint kodwa ngokujwayelekile seluleka amaklayenti ethu ukuthi akhethe ukuthunyelwa kwevidiyo kombukiso wesilayidi se-Powerpoint uma kungenzeka.
-Isidlali se-PowerPoint sinobunikazi futhi sivumela ukuxhumana okuncane kakhulu, ngokwesibonelo awukwazi ukuvula ama-powerpoints ama-2 ngasikhathi sinye noma kungenzeki ukuyinika amapharamitha afana nobubanzi bokuphakama be-xy endizeni kugcwele isikrini esigcwele noma esigcwele ...
-Udinga ilayisense yehhovisi kumdlali we-pc futhi ...
Ngezethulo zakho eziguqulwe zaba yividiyo ungabonisa kusuka kuzethulo ezi-1 kuye kwezingama-24 ezikrinini zakho ku-EMD, uma ividiyo yakho isendaweni ongayichofoza kuyo futhi izoboniswa kusikrini esigcwele, chofoza futhi futhi izothuthelwa endaweni yayo zone futhi ungamisa isikhashana isethulo sakho.
Kungani uguqula isethulo sakho sibe yividiyo?
Uma ufuna ukunikeza ukwethembeka okuphezulu kwesethulo sakho kozakwenu noma kumakhasimende akho (njengokunamathiselwe kwe-imeyili, ngokushicilelwa kuwebhu noma kwi-CD noma i-DVD), ungakuqopha bese uyidlala njengevidiyo.
Ungagcina isethulo sakho njengefayela levidiyo le-MPEG-4 (.MP4) noma .wmv. Womabili la mafomethi asekelwa kabanzi futhi angasetshenziselwa ukusakazwa kwewebhu.
Nawa amanye amathiphu okufanele uwakhumbule lapho urekhoda isethulo sakho njengevidiyo
Ungarekhoda nesikhathi sokulandisa kwezwi nokuhamba kwesikhombi se-laser kuvidiyo yakho, futhi ungalawula usayizi wefayela lemidiya nekhwalithi yevidiyo yakho futhi ungafaka ukugqwayiza nokuhwebelana ku-movie yakho.
Izithameli zakho zingabuka isethulo ngaphandle kokufaka i-PowerPoint kwikhompyutha yazo.
Uma isethulo sakho siqukethe ividiyo eshumekiwe, ividiyo izodlala kahle ngaphandle kokuthi uyihlole.
Ngokuya ngokuqukethwe isethulo sakho, ukudala ividiyo kungathatha isikhathi. Izethulo ezinde nezethulo ezinopopayi, ushintsho nokuqukethwe kwemultimedia kuzothatha isikhathi eside ukudala. Ngenhlanhla, ungaqhubeka nokusebenzisa i-PowerPoint ngenkathi ividiyo idalwa.
Ungaguqula kanjani ifayela lakho le-PowerPoint libe yividiyo
Kulesi sigaba, sizokuchazela ukuthi ungaguqula kanjani ifayela lakho le-PowerPoint libe yividiyo.
Ukusuka kwimenyu yefayela, khetha u-Gcina ukuze uqinisekise ukuthi umsebenzi wakho wakamuva ugcinwa ngefomethi yesethulo se-PowerPoint (.pptx).
Chofoza Ifayela> Thumela> Dala Ividiyo. Noma, kuthebhu yokuRekhoda yeRibhoni, chofoza okuthi Thumela kuVidiyo).
Ebhokisini lokudonsa lokuqala ngaphansi kwesihloko esithi Dala Ividiyo, khetha ikhwalithi yevidiyo oyifunayo, okuyisinqumo sevidiyo eqediwe. (Ungahle uthande ukuhlola izinketho ezahlukahlukene ezitholakalayo ukunquma ukuthi iziphi ezilungele izidingo zakho).
I-Ultra HD (4 Ko) *
3840 x 2160, usayizi wefayela ophakeme kunayo yonke
I-HD ephelele (1080p)
1920 x 1080, usayizi wefayela omkhulu kunayo yonke
Ikhompyutha ne-HD display
1 280 x 720, usayizi wefayela ophakathi
852 x 480, usayizi wefayela ophansi
* Inketho ye-Ultra HD (4k) itholakala kuphela uma usebenzisa iWindows 10.
Ibhokisi lokudonsa lesibili ngaphansi kwesihloko esithi Dala Ividiyo likhombisa ukuthi ingabe iphrezentheshini yakho ifaka ukulandisa nezikhathi. (Ungavumela / ukhubaze lokhu kulungiselelwa uma ufisa).
Uma ungarekhodanga ukulandisa okunesikhathi, okuzenzakalelayo ukuthi Ungasebenzisi isikhathi nokulandisa okurekhodiwe.
Ngokuzenzakalelayo, isikhathi esichithwa kusilayidi ngasinye yimizuzwana emi-5. Ungasishintsha lesi sikhathi kumasekhondi ozosisebenzisa endaweni ngayinye yama-slide. Ngakwesokudla kwebhokisi, chofoza umcibisholo ophezulu ukuze wandise isikhathi noma umcibisholo waphansi ukunciphisa isikhathi.
Uma urekhode ukulandisa okunesikhathi, inani elizenzakalelayo linguSebenzisa isikhathi esiqoshiwe nokulandisa.
Chofoza okuthi Dala Ividiyo
Ebhokisini lefayela lefayela, faka igama lefayela levidiyo, upheqa kwifolda lapho ufuna ukuligcina khona ifayela, bese uqhafaza ku-Gcina.
Ebhokisini lohlobo, khetha i-MPEG-4 Video noma iWindows Media Video.
Ungalandela inqubekela phambili yokwakhiwa kwamavidiyo kubha yomumo ezansi kwesikrini sakho. Inqubo yokwenziwa kwevidiyo ingathatha amahora amaningi kuya ngobude bevidiyo nobunzima besethulo.
Ithiphu: Endabeni yevidiyo ende, ungayisetha ukuthi idalwe ngakusasa. Ngale ndlela izobe isilungele ukusa.
Ukudlala ividiyo osanda kuyidala, uye endaweni ekhethiwe yefolda bese uchofoza kabili kufayela.
Uma usenemibuzo noma izinkinga ngesibonisi sakho noma ukulungiselelwa kwakho, unganqikazi ukuvakashela i- FAQ, landa eyethu umhlahlandlela womsebenzisi noma uxhumane nesevisi yethu yamakhasimende ku support@easy-multi-display.com. Sizojabula ukukusiza futhi sizokujabulela ukuzwa umbono wakho!
Landa isoftware yethu
Uma unesithakazelo ku-software yethu ye-Easy Multi Display, chofoza lapha ukulanda inguqulo yethu yesivivinyo samahhala.
Ezinye izindatshana esizithandayo futhi ozozithanda!
Izimpawu zedijithali zisiza ngokukhishwa komuthi wokugoma we-NYC COVID-19
Izindlela ezi-5 ezihlakaniphile zokuvuselela ukumaketha nokuxhumana kwakho nezimpawu zedijithali
Kungani Izimpawu Zedijithali Seziguqukile Zisuka Esifisweni Zaya Kokumele Zenze Imboni ye-QSR
Ilogo ye-Easy Multi Display